कहिले घट्छ कर्जाको ब्याज ? « Sansar News
कहिले घट्छ कर्जाको ब्याज ?
२९ वैशाख, काठमाडौं । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण सरकारले चैत्र ११ गते देखि गरेको बन्दाबन्दीले सबै भन्दा प्रभाबित भएको क्षेत्र नै आर्थिक क्षेत्र हो । आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर परे पनि यो समयमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा ठूलो मात्रामा लगानी योग्य रकम जम्मा भएर बसेको छ । यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेक आर्थिक गतिविधि बन्द थिए भने बैंक तथा बित्तिय संस्थाका अधिकांस शाखाहरु पनि बन्द थिए । यस्तो अबस्था हुँदा पनि बैंकहरुमा ठूलो मात्रामा रकम थुप्रिएर बसेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो अबधिमा बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ ।
“चैत्र महिनामा बैंकहरुको ब्याजको आधार दर औषत ९.३६ प्रतिशत थियो भने कर्जा र निक्षेपको अन्तर (स्प्रेड रेट ) औषतमा ४.९६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरुले आधार दरमा कम्तीमा २ प्रतिशत थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछन । यसरी हेर्दा औषत आधार दर ९.३६ प्रतिशत हुदां कर्जाको न्युनतम ब्याजदर ११.३६ प्रतिशत हुन्छ । त्यसमा बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क त छुट्टै छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा बित्तिय संस्थामा गत चैत ११ मा ३५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो यो बढेर वैशाख २७ सम्ममा ३६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ बैंकमा लगानी योग्य पूँजी थन्किएर बसेको छ । लगानी माग गर्ने अधिकांस उद्योग कलकारखाना बन्दाबन्दिले थलिएकोे अबस्था छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रहरु बन्द हुने र लगानी योग्य पूँजी बैंकहरुमा थन्किएको अबस्था छ । तत्कालै नै उद्योग धन्दाहरु सन्चालन हुने अबस्था आए पनि पूँजीको अभाब हुने देखिन्छ । बैकमा पैसा त छ तर ब्यजदर महंगो छ । चैत्र महिनाको बैंकहरुको आधार दर हेर्ने हो भने बैंकहरुले ब्याज घटाउने देखिंदैंन ।
चैत्र महिनामा बैंकहरुको ब्याजको आधार दर औषत ९.३६ प्रतिशत थियो भने कर्जा र निक्षेपको अन्तर (स्प्रेड रेट ) औषतमा ४.९६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरुले आधार दरमा कम्तीमा २ प्रतिशत थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछन । यसरी हेर्दा औषत आधार दर ९.३६ प्रतिशत हुदां कर्जाको न्युनतम ब्याजदर ११.३६ प्रतिशत हुन्छ । त्यसमा बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क त छुट्टै छ । महंगो ब्याजको कर्जा लिएर उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा महंगो पर्न जान्छ । यसले उत्पादन गर्नु भन्दा आयतमा जोड दिन्छ । यता तिर बैंकहरुको ध्यान गएको देखिंदैन ।
सामान्यतया अर्थ व्यवस्थामा मागको तुलनामा पूर्ति बढी भयो भने मूल्य घट्दछ । यो सिद्धान्त बैंकमा पनि लागु हुने कुरा राष्ट्र बैंक तथा स्वयं बैंकरहरुले पनि बताउने गरेका छन । अहिले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ तर ब्याज दर घटेको छैन । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत घटाएर तरलता बढाउने नीति लियो । तर कर्जाको ब्याज दर सामान्य अबस्थाको जस्तै औषत ९.३६ प्रतिशत, कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट) करिब ५ प्रतिशत रहेको छ । यसको मतलब बैंकहरुले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा पनि जहाँबाट सबै भन्दा धेरै ब्याज असुल्न सकिन्छ त्यतै तिर लगानी गर्ने देखिन्छ ।
बैकहरुले चैत्र महिनाको आम्दानी सर्बजनिक गर्न थालेका छन । जस अनुसार अधिकांस बैंकहरुको आम्दानी १५ प्रतिशतको हाराहरीमा हुने देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने जस्तोसुकै संकट परे पनि बैंकहरुलाई समस्या पर्दैन । कोरोनाको विश्व व्यापि माहामारीले प्राय सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । यस्तो माहामारीको सबैले दुखलाई बाँडेर सामना गर्नु पर्ने हो तर बैकिङ क्षेत्र दुखलाई बाडेर सामना गर्ने भन्दा पनि मौका यहि हो भन्दै जसरी पनि बढी नाफा कमाउने तर्फ उद्यत देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बैकका संचालक तथा सिईओहरुको बिचमा देखिएको खटपटले पनि देखाउँछ । बैंकका संचालकहरु कर्जाको ब्याजदर घटाउँन तयार हुने तर सिईओहरु चाहिं तयार नहुने अबस्थाले पनि नेपालका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको उद्देस्य के हो भन्ने कुरा प्रस्ट पार्दछ ।
अहिलेको संकटको सामना गर्नका लागि अनाबस्यक खर्च घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने बित्तिय क्षेत्र सरकारसंग च्याँखे थापेर बसेको छ । तर सबै तिरबाट प्रस्न उठ्न थालेको छ, कहिले घट्छ कर्जाको ब्याज ? र उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाईन्छ । अहिलेको अबस्थाले नव नियुक्त गभर्नरले बैकिङ सिण्डिकेटका बिरुद्ध कस्तो कदम चाल्छन चासोको विषय वनेको छ ।
हेर्नुहोस बैंकहरुको २०७६ चैत्र महिनाको आधार दर र स्प्रेड दर
पोलिटब्यूरो र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न माओवादी केन्द्रले बोलायो…